Sofa Fekitori | China Sofa Vagadziri, Vatengi
Runhare: +86 13615410178
Yongsheng imba nhema nhema ...
Yongsheng imba yese simbi ive ...
Yongsheng imba pamutsago mubhedha
Yongsheng musha wedenga mubhedha, ...
Kutonhora kunotora chimiro chitsva muimba yako yekutandarira nesofa reHollyann. Kutenderedza yako yakashongedzwa, yemadhorobha nzvimbo, ichi chidimbu mutambo we velvety yakapfava upholstery uye yakapfava, yakapetwa makumbo. Peta nekunyaradza, uye nyatso kutendeuka yako yekushongedza imba.
Yakadzika-yakagadzika nechitarisiko chemazuva ano, iyi muunganidzwa inounza super-nyoro yekunyaradza nyaradzo kuimba yekutandarira. Kiyi yeiyo chikamu chakasarudzika chinzvimbo chinodzika chinobvumira yakawanda nzvimbo yekutandarira nemabhuruku echigaro makushingi, anotsigira kumashure makushoni uye kukanda mapiro. Yakasimudzwa mumucheka wakaita senge yerineni, iyo chikamu chine makona efurufuru emakwenzi akanaka uye akajeka kududzira. Yakagadzirwa nechigaro chisina maoko, kona, isina ruoko rudo uye ottoman, chikamu chechina-chikamu chikamu Crate uye Bharari chete.
Iine dhizaini-yekuchengetedza dhizaini uye modular kuchinjika, Strom inounza yazvino chikamu chikamu zvigaro kumakamuri madiki uye dzimba. Yakagadzirwa kurudyi-ruoko kona kona loveseat uye isina maoko chaise, iwo maviri-chidimbu chikamu chakasimudzwa mune yemhuri-inoshamwaridzika basketweave ye plush chenille kune yakawanda yekubatika magadzirirwo. Iyo boxy silhouettes uye yakachena-yakamisikidzwa yakasimba kumonera inowedzeredzwa neyakaonda pombi-dhizaini simbi makumbo akapedzwa mune matte nhema. Iyo Strom mbiri-chidimbu chikamu chikamu Crate uye Bharari yakasarudzika.
Sonoran Block Gumbo Sofa
Yakareba, yakaderera uye yakagadzirirwa lounging, Pacific inozadza emakamuri ekurarama epanguva yacho neyakareruka, inotonhorera maitiro. Iyo sofa yakaenzana zvakaenzana inoenzanisira njanji yayo yakatetepa uye yakatetepa maoko nemawindow yemazuva ano emapiro kumashure makushiti, mabhurugwa uye isina musono, mombe-isina bhenji chigaro pamutsago. Pacific inogara yakapfava asi isina kunyanyisa, ichiita kuti ive yakanaka kune diki-nzvimbo yekugara. Crate & Barrel yakasarudzika, iyo pasofa yePacific inogadzirwa neinjiniya yehuni inosimbiswa neForest Stewardship Council (FSC), muyero wegoridhe yezvakatipoteredza kumasango anotarisirwa zvine mutsindo.
Wese munhu anokokwa Kuungana. Kurova chiyero chakakwana pakati pekunyaradza uye yazvino masitayera, Unganidza yakachena-yakamisikidzwa uye yazvino. Iyo 98-inch sofa inovhuna ivhu nyowani nedete rakatetepa iro rinoisa zvese kutarisisa kune iro boxy, yakawedzera-plush zvigaro pamakusheni. Trim yekumusoro-yekusona uye isina musono mawrestrests anochengeta chitarisiko chakatsvinda, kwete fussy. Yakasarudzika Crate neBarrel dhizaini, iyo Gather sofa inogadzirwa neinjiniya huni inosimbiswa neForest Stewardship Council (FSC), muyero wegoridhe yezvakatipoteredza kumasango anotarisirwa zvine mutsindo.
Mune chicest mumvuri we grey, Calion sofa's linen-weave upholstery inozadzisa akawanda kudaro marangi zvirongwa uye aesthetics. Akapisa maoko, akakurumbira kugashira uye flamestitch-anodhinda mapiro anowedzera zvakaringana panache kune ino inotapira uye yakapusa sofa. Anotsigira macushion echigaro anoita kune imwe yakanaka kumhara pad.